China Pure Water Prodution Machine ifektri abakhiqizi | GXUMA
Umshini Wokususa Amanzi Omsulwa
ukugeleza komshini ohlanzekile wamanzi ahlanzekile: amanzi amnyama → ithangi lamanzi aluhlaza → i-booster pump → isihlungi sesihlabathi se-quartz → isihlungi se-carbon esetshenzisiwe → i-ion softener → isihlungi sokunemba → i-reverse osmosis → i-ozone sterilizer → ithangi lamanzi elimsulwa → ipompo lamanzi elihlanzekile → ukuwashwa kwamabhodlela, ukugcwaliswa nokufakwa kukaphethi ulayini wokugcwalisa → uhambisa → isibani
ukugeleza komshini ohlanzekile wamanzi ahlanzekile: amanzi amnyama → ithangi lamanzi aluhlaza → i-booster pump → isihlungi sesihlabathi se-quartz → isihlungi se-carbon esetshenzisiwe → i-ion softener → isihlungi sokunemba → i-reverse osmosis → i-ozone sterilizer → ithangi lamanzi elimsulwa → ipompo lamanzi elihlanzekile → ukuwashwa kwamabhodlela, ukugcwaliswa nokufakwa kukaphethi ulayini wokugcwalisa → ukuhambisa → ukuhlolwa kwesibani → umshini wokumisa → ukusetha ilebula → umshini welebula we-shrinkage → umshini wokufafaza ikhodi → umshini wokufaka ifilimu we-PE othomathikhi.
Le nkampani ihlinzeka ngemishini ephelele elandelayo: 1. Amanzi amaminerali amancane naphakathi nendawo kanye namanzi wokuhlanza amathini wokuhlanza amabhodlela ka-2000-30000 / h. 2. Umugqa wokukhiqiza oshisayo wokugcwalisa ujusi neziphuzo zetiye amabhodlela / ihora le-2000-30000. 3. Isiphuzo se-Carbonated sikhiqizwa ngokugcwaliswa kwe-isobaric 2000-30000 amabhodlela / h.
(1) isigaba sokuqala se-pretreatment system: isihlungi se-quartz sand medium sisetshenziselwa ukususa i-sediment, i-rust, izinto ze-colloidal, izinto eziqinile ezimisiwe nezinye izinto eziyingozi emzimbeni womuntu emanzini aluhlaza ngezinhlayiya ezingaphezu kuka-20 μm. uhlelo lokuhlunga oluzenzakalelayo lisebenzisa i-valve yokulawula othomathikhi yomkhiqizo ongenisiwe, futhi uhlelo lungavele luzenzele (ngesandla) uchungechunge lwemisebenzi efana ne-backwash nokudlulela phambili. Qinisekisa ikhwalithi yamanzi yemishini futhi wandise impilo yokusebenza kwemishini. Ngasikhathi sinye, imishini ifakwe uhlelo lokuzilungisa ukunciphisa izindleko zesondlo.
(2) isigaba sesibili sohlelo lwe-pretreatment: igobolondo le-carbon activated filter lisetshenziselwa ukususa i-pigment, iphunga, into ephilayo yamakhemikhali, inani le-ammonia elisele, ukungcola kwe-pesticide nezinye izinto eziyingozi nokungcola emanzini. Uhlelo lokulawula isihlungi oluzenzakalelayo, lisebenzisa i-valve yokulawula othomathikhi yomkhiqizo ongenisiwe, uhlelo lungavele luzenzele (ngesandla) uchungechunge lwemisebenzi efana ne-backwash, i-flushing enhle, njll.
(3) isigaba sesithathu se-pretreatment system: i-resin esezingeni eliphakeme isetshenziselwa ukuthambisa amanzi, ikakhulukazi ukunciphisa ubulukhuni bamanzi, ukususa i-calcium ne-magnesium ion (isikali) emanzini, nokwenza ukuvuselelwa kwe-resin okuhlakaniphile. Uhlelo lokuhlunga oluzenzakalelayo lwamukela isithambisi samanzi esizenzekelayo samazwe angenisiwe, futhi uhlelo lungahlehlisa emuva ngokuzenzakalela (ngesandla).
(4) isigaba sesine sokwenza uhlelo lwangaphambi kokwelashwa: isigaba sesibili se-5 μ m pore size precision filter (isigaba esisodwa esingezansi kwe-0.25 ton) samukelwa ukuqhubeka nokuhlanza amanzi, nokwandisa amandla we-turbidity ne-chroma yamanzi, nokuqinisekisa ukuphepha kohlelo lwe-RO.
(5) umshini omkhulu wemishini yokuhlanza amanzi: ubuchwepheshe be-reverse osmosis buyemukelwa ukwelashwa kukasalaline ukususa izinto ezisindayo zensimbi nokunye ukungcola okuyingozi emzimbeni womuntu njenge-calcium, i-magnesium, i-lead kanye ne-mercury, futhi kunciphise ubulukhuni bamanzi. Izinga lokususa usawoti lingaphezu kwama-98%, futhi amanzi ahlanziwe ahlangabezana nezinga likazwelonke akhiqizwa.
(6) uhlelo lokuvala inzalo: i-ultraviolet sterilizer noma i-ozone generator (esinqunywe ngokuya ngezinhlobo ezahlukahlukene) isetshenziselwa ukwenza ngcono impilo yeshalofu. Ukuze uthuthukise umphumela, i-ozone kufanele ixutshwe namanzi futhi ukuhlushwa kufanele kulungiswe kwisilinganiso esihle kakhulu.
(7) ukuwasha ngasikhathi sinye: insimbi engagqwali semi-othomathikhi yokuwasha amabhodlela isetshenziselwa ukuhlanza izindonga zangaphakathi nezangaphandle zebhodlela, futhi nenani lamanzi okuwasha lingalungiswa.
Langaphambilini Isiphuzo Esenziwe Carbonated Futhi Soda Phuza Prodution Machine
Olandelayo: Umshini Wokudla Okusemathinini Nensiza Yokukhiqiza yeJam
Máquina de productción de agua pura
Uphayinaphu Orange Fresh Fruit Concentrate Juice ...
Umugqa Wokukhiqizwa KweJomegranate Concentrate Juice
Qedela Umugqa Wokukhiqizwa Kwamanzi Amanzi Amabhodlela
Qedela Umugqa We-Peach Juice Jam Production Ma ...